बुढेसकालमा दीपाश्रीले को सँग विहे गरिन ? दुलही देख्नु भयो भने...
Home » मनोरञ्जन » बुढेसकालमा दीपाश्रीले को सँग विहे गरिन ? दुलही देख्नु भयो भने…
July 18, 2017	1	By khabarservice
हास्य कलाकार एवं सुपरहिट फिल्म ‘छक्का पञ्जा’की निर्देशक दिपाश्री निरौला मंगलबार दुलहीको पहिरनमा देखिएकी छन् । उनसँग दुलाहा पनि सँगै थिए ।
यो दृश्य हो बत्तीसपुतलीको राम मन्दिरको । जहाँ दीपाश्री नायक संजोग कोइरालाकी दुलही बनेकी थिइन् । तर, यो रियल लाइफका लागि भने होइन् । एक तीज गीतको भिडियोको छायांकनका क्रममा मंगलबार दिपा र संजोगको विवाहको दृश्य खिचिएको हो ।
रोचक कुरा के छ भने संजोग कोइराला छक्का पञ्जाकी नायिका बर्षा राउतका प्रेमी हुन् । उनै वर्षाका प्रेमी संजोगसँग रिल (गीतको भिडियो)का लागि दीपाले नक्कली विवाह गरेकी हुन् । यो दृश्य शोभा थापाको ‘बहिनीको भिनाजु’ बोलको तीज गीतको हो ।
उमेर ४० कटिसकेकी दीपाश्री हालसम्म अविवाहित छिन् । उनका सहकर्मी दीपकराज गिरीको भने छोराले समेत विहे गरिसकेका छन् ।
Tagsछक्का पञ्जा दिपाश्री निरौला बर्षा राउतका
फोटोसहितको मतदाता नामावली दर्ता अबको लागि समय पनि थपियो
सरापेले पहलमानको कान टोकेर भगाए पछि…(भिडियो)
गार्गी नेपाल says:
हामी नेपाली पछाडि परेका नै अरूको व्यक्तिगत जीवनमा अनावश्यक चासो राखेर । बिहे गर्नु वा नगर्नु It’s personal thing. अनि कुन उमेरमा गर्ने पनि । ऋषि धमला ज्यूले ४२ वर्षको उमेरमा १८ वर्षकी युवतीसँग बिहे गर्दा वा क्या सुहाउँदो जोडी अरे । एउटि कर्मशील महिलालाई चाहिं चालिसको उमेर बुढेसकाल अरे । हामीले महिला र पुरूष प्रतिको विवेद पुर्ण सोच कहिले बदल्ने ॽ मानिस त्यति बेला बूढो हुन्छ जति बेला उसले नयाँ कुरा सिक्न र गर्न छोड्छ । दिपाश्री ज्यूले हरेक पल नयाँ नयाँ सोच र योजनाका साथ कला क्षेत्रमा अगाडी बढि रहेको हामीले देखिरहेका छौं । So she is still young and active. यो समाचार लेख्ने पत्रकार ज्यूलाई चाहिँ बुढेसकाल पक्कै लागेको हो जो एउटी सक्रीय जीवन बिताइरहेकी महिलालाई बुढेसकाल लागेको देख्नु हुन्छ ।